အလုပ်သမားများ' ဒုက္ခသည်များအတွက်အခွင့်အရေးများသတင်းအချက်အလက်များ & ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ | USAHello
USA တွင်, လူတိုင်းအလုပ်ခွင်ထဲမှာမျှမျှတတဆက်ဆံသင့်. သငျသညျအလုပျမှာသငျသညျကိုကာကွယ်ရန်အချို့သောအခွင့်အရေးရှိသည်. အလုပ်ရှင်များဥပဒေများကိုလိုက်နာရမည်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်အပြစ်ပေးလိမ့်မည်. Learn more about workers’ USA တွင်အခွင့်အရေးများ.
The USA has workers’ သငျသညျစေရမယ်ငွေဘယ်လောက်ဆိုအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေများ. သငျသညျအလုပ်လုပ်နိုင်နာရီမည်မျှအကြောင်းကိုဥပဒေများနှင့်ဘယ်လိုသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သငျသညျဆကျဆံလည်းရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သင်သည်အလုပ်လုပ်ဘို့အလုံခြုံပြီးကျန်းကျန်းမာမာရာအရပျပေးရမညျ. သူသို့မဟုတ်သူမမပါလျှင်, သူတို့ဥပဒေဖြင့်အပြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်.
ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအဘို့ဥပဒေများစေသည်. ပြည်နယ်အစိုးရများက၎င်းတို့၏ပြည်နယ်များတွင်ဥပဒေများအောင်. ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်ပြည်နယ်အစုတခုနိမ့်ဆုံးလုပ်ခများ. နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခအလုပ်ရှင်များဟာသူတို့ရဲ့န်ထမ်းပေးဆောင်ရမယ်လို့နိမ့်ဆုံးပမာဏ. ဖက်ဒရယ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခဖြစ်ပါသည် $7.25 တစ်နာရီလျှင်. ဒါဟာဘယ်နေရာမှာမဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မဆိုအလုပ်ရှင်သည်အနည်းဆုံးသင်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ် $7.25 တစ်နာရီလျှင်. သင်လုပ်နိုင်သည် အလုပျသမားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ’ ဘာသာစကားမြားစှာအခွင့်အရေးနှင့်လစာ.
တခါတရံပြည်နယ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခဖက်ဒရယ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခထက် ပို. မြင့်မားသည်. ဥပမာ, ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အရီဇိုးနားပြည်နယ်နှစ်ခုလုံး၏အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခများ $11.00 တစ်နာရီလျှင်. ဤအပြည်နယ်များရှိ, အလုပ်ရှင်များအလုပ်သမားပိုမိုမြင့်မားသောငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ရပါမည်. သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခကိုရှာဖွေ.
သိကောင်းစရာများသင်၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှဖောက်သည်များအနေဖြင့်ပိုက်ဆံများမှာ. သိကောင်းစရာများဝန်ဆောင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ဒါမှမဟုတ်အခွန်ပမာဏမပါဝင်ပါ. သင်တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်သင်ထက်ပို၏အကြံပေးချက်များခံယူတဲ့အလုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့လျှင် $30 တစ်လ, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါသည် “ဝန်ထမ်းတင်ရန်။” တင်ရန်န်ထမ်းအနည်းဆုံးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည် $2.13 တစ်နာရီပေါင်းဟာသူတို့ရဲ့အကြံပေးချက်များ. သိကောင်းစရာများထက်ပိုရှိရမည် $5.12 တစ်နာရီကိုသင်ဆဲ၏ဖက်ဒရယ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခဝင်ငွေဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာ $7.25 ($2.13 + $5.12 = $7.25).
ဥပဒေကြမ်းထဲမှာအစွန်အဖျားများပါဝင်သည်တချို့စားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ်. သငျသညျငှားရမ်းထားကြသောအခါ, သင့်ရဲ့သူဌေးကိုသင် Tipping ပတ်သက်. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောပြလိမ့်မယ်. သင်ကအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် တင်ရန်န်ထမ်းများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဒီမှာ.
အချို့နိုင်ငံများရှိ, အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားပေးဆောင်နေကြ. သို့သော်, အမေရိကန် ဥပဒေများ ဒီခွင့်မပြုပါဘူး. သင်တစ်ဦး Co-အလုပ်သမားကဲ့သို့တူညီသောအလုပ်လုပ်နေကြပါလျှင်, သငျသညျတူညီသောအခကြေးငွေရမည်ဖြစ်သည်. သင်တို့သည်လည်းအတူတူပင်အချိန်ပိုလစာရသင့်တယ်, အားလပ်ရက်နာရီ, နှင့်ဆုကြေးငွေ. ဝန်ထမ်းများသာသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောရာထူး၌ရှိကြ၏လျှင်ပိုပြီး get သို့မဟုတ်တူညီသောအနေအထားအတွက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်သင့်တယ်. သူတို့မှာအလုပ်မလုပ်သည်ထိုလယ်၌ပိုကောင်းကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုပါကသူတို့ကအစပိုပြီးပေးဆောင်နိုင်.
အသက်အရွယ်: ဖြစ်ခြင်း 40 သို့မဟုတ်အထက်
သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် အလုပ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုဥပဒေများ. မသန်စွမ်းန်ထမ်းများ အပိုဆောင်းအခွင့်အရေးများ ပညတ်တရားအောက်၌.
သငျသညျအလုပ်လုပ်နေစဉ်ဒဏ်ရာကိုသင်ဖွစျနိုငျ. သငျသညျကိုထိခိုက်စေရခဲ့လျှင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်, ချက်ချင်းပဲသင့်ရဲ့မန်နေဂျာကိုပြောပြရန်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ဒဏ်ရာကုသရန်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်. အလုပ်သမားများ’ လျော်ကြေးဥပဒေများ ကုသမှုရှိသည်ဖို့သင့်အခွင့်အရေးများကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ကုသမှုနှင့်လုပ်ခ၏အချို့သင့်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်များအတွက်ပေးဆောင်နိုင်.
သင့်ကုမ္ပဏီသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှုအရာကိုကြည့်ဖို့ခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်, အိတ်, သိုလှောင်မှု Locker တွေ, နှင့်အိတ်ကိုယ်စီကိုင်ထားသာသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏. သင်ကပေါ်တွင်သင်၏နာမကိုအမှီရှိကြောင်းမေးလ်လက်ခံရရှိခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့မန်နေဂျာဖတ်ခွင့်မပြုပါ.
သငျသညျအလုပျအတှကျကှနျပြူတာသုံးလျှင်, သင့်ရဲ့သူဌေးကိုသင့်အီးမေးလ်များကိုကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးကိုဖုန်းသုံးလျှင်, အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ, listen to ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်. ဒီအတိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်. သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုအနုတ်လက္ခဏာအမှုအရာလို့ပြောသို့မဟုတ်ရေးဖို့ဘယ်တော့မှသင့်တယ်.
မမျှတရပ်စဲသင်တစ်ဦးတရားမဝင်အကြောင်းပြချက်ပစ်ခတ်တယ်ဆိုလိုသည်. သင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းထင်နေလျှင်, အလုပ်ဒဏ်ရာ, သို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်, သင်တစ်ဦးရှေ့နေမှပြောနေတာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်. အလုပျသမားနှင့်အတူလူကိုကူညီတဲ့သူရှေ့နေများကရှိပါတယ်’ အခွင့်အရေး. သင်လုပ်နိုင်သည် အခမဲ့နှင့်တတ်နိုင်ရှေ့နေများကတွေ့ပါ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များကူညီသူကို.
သငျသညျတရားမဝင်အမှုအရာသည်သင့်လုပ်ငန်းခွင်ရှိဖြစ်ပျက်နေကြသည်ထင်ပါလျှင်, သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အားပြော. သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ကူညီပေးနိုင်မပါလျှင်, ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာချရေး. သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်ဤအချက်အလက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်.
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သင့်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အန္တရာယ်မရှိသေချာအောင်ရမယ်. အန္တရာယ်များကိုသင်ထိခိုက်စေနိုင်သောအရာဖြစ်ကြ၏, ထိုကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းသို့မဟုတ်မလုံခြုံရေးကိရိယာများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်. တခါတလေ, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အလုံခြုံရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. ဥပမာ, တစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားအရပ်ရှည်ရှည်အဆောက်အဦပေါ်တက်ရန်ရှိသည်စေခြင်းငှါ,. ပညတ်တရားအောက်၌, အလုပ်ရှင်များအလုပ်ခွင်မှာအလားအလာအန္တရာယ်များအကြောင်းကိုသင်ပြောပြရန်ရှိသည်. သူတို့ကအစသင်နားလည်သောဘာသာစကား၌သငျလေ့ကငျြ့ပေးရန်ရှိသည်. သငျသညျခံစားရသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုပါလျှင်အရာတစ်ခုခုကိုသင့်ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသိကြောင်းမလုံခြုံဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကိုပြောပြ. အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာပါ အလုပ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအခွင့်အရေးများ.